Ahlusunada G/Gedo oo Qaadacday kulan ka dhici lahaa Magaalada Nairobi – SBC
Ahlusunada G/Gedo oo Qaadacday kulan ka dhici lahaa Magaalada Nairobi
Maamulka Ahlusuna waljamaaca ee gobolada Koonfureed ee Dalka ayaa waxay gebi ahaanba qaadaceen islamarkaana ay sheegeen in aysan ka qeyb geli doonin shir la filayo in maalinta berito ah uu ka dhicidoono Wadanka Kenya gaar ahaan magaalada Nairobi.
Shirkaas ayaa waxaa ka qeyb geli doona xubno ka tirsan DKMG ah, iyo Ahlusuna waljamaacada qeyboka mid ah gobolada dhexe iyo koonfurta dalka.
Sh Maxamed Alqaadi Afhayeenka Ahlusuna ee gobolka Gedo ayaa kulan saxaafadeed uu ku qabtay degmada Baladxaawo ee gobolkaaso waxa uu ku sheegay in shirka beri lagu wado in uu ka dhaco magaalada Nairobi aysan ka qeyb geli doonin maadaama ayuu yiri aan loogaga yeerin.
Waxa uu intaasi ku daray Sh Aqaadi in shirkaasi ay tageen xubno aan wakiil ka aheyn Ahlusunada Koonfureed islamarkaana taasi ay tahay mid meel loogaga dhacayo Culimada Ahlusuna ee gobolada Koonfureed.
Hadalka Afhayeenka Culimada Ahlusuna waljamaaca ee gobolada Koonfureed ayaa imanaya xili lagu baaqay kulan sedax geesood ah oo maalinta Beri ah ka furmaya magaalada Nairobi kaas oo ay isugu iman lahaayeen Xubno ka tirsan DKMG ah iyo Ahlusuna Waljamaaca.